Global Voices teny Malagasy » Brunéi : Amidy Anaty Bilaogy Koa Ny Mofomamy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Desambra 2017 12:14 GMT 1	 · Mpanoratra Senor Pablo Nandika (fr) i Fabienne Flessel, imanoela fifaliana
Sokajy: Broney, Mediam-bahoaka, Sakafo, Toekarena sy Fandraharahàna
Mampiasa ny blaogy ho fitaovana fivarotana mba hamarotana ny entany ireo mpanao mofo sy mpanao mofomamy ao amin'ny sultanat an'i Brunéi  . Maro no renim-pianakaviana na matihanina izay manao ny famokarana mofomamy amin'ny tapa-potoany ary manolotra ny vokany ao amin'ny blaoginy tsirairay avy. Tena nandeha tsara izany ho an'ny maro ary nitondra vokany teny amin'ny tontolon'ny media teo anivon'ireo mpamaky blaogy.
Maro amin'ireo mpanao mofomamy ireo, toa an'i Breadstop  [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy manaraka ato], no manasongadina ny fampiasana akora mahasalama amin'ny fanamboarana ireo mofomaminy. Mirehareha amin'ny sakafo mahasalama ihany koa ny Bunny's Yummies . [amin'ny teny anglisy ireo rohy]:
Tsy namela an'i Brunéi ity fironana vaovao erantany amin'ny fanamboarana mofomamy kely be dia be ity, ary tena lasa ankafizin'ireo blaogera indrindra izy ireo, sy ireo mpanjifa ihany koa. Ireto blaogera manaraka ireto dia niompana manokana tamin'ny fanamboarana ireo mofomamy kely ireo ary manolotra vokatra maro karazana ho an'ireo mpanjifany tsirairay avy: Kitchen of Jasmine , Cupcake Paradise, Candy , Sinah Bakery , Sugarush , Taste on Tray  [amin'ny teny anglisy] ary Warisan Ummi  [amin'ny teny bhasa].
Manoritsoritra ny famokaran'ny orinasany [amin'ny teny anglisy] ny Cit's Cupcakes :
Mitantara [amin'ny teny anglisy] i Underserenity , mpanao mofomamy ao amin'ny blaogy Sugarush:
Mpanjifa sasany toa an'i AnakBrunei, no mitantara ny traikefa ara-tsakafony  [amin'ny teny anglisy] :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/18/112130/
 sultanat an'i Brunéi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Negara_Brunei_Darussalam
 Bunny's Yummies: http://bunnypablo.blogspot.com/
 Kitchen of Jasmine: http://kitchenofjasmine.blogspot.com/
 Sinah Bakery: http://sinahbakery.blogspot.com/
 Taste on Tray: http://tasteontray.blogspot.com/
 Warisan Ummi: http://warisanummi.blogspot.com/
 Cit's Cupcakes: http://citscakes.blogspot.com/
 Mpanjifa sasany toa an'i AnakBrunei, no mitantara ny traikefa ara-tsakafony: http://anakbrunei.org/page/7